ယောင်းအမေရဲ့ ကျန်းမာရေးက ယောင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်လား? - For her Myanmar
ယောင်းအမေရဲ့ ကျန်းမာရေးက ယောင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်လား?
by For Her Myanmar
ခေါင်းစဉ်ကြီးကြည့်ပြီး အံ့သြသွားပြီလား? တကယ်တော့ ယောင်းမေမေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ ယောင်းရဲ့ အနာဂတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကျန်းမာရေး နှစ်ခုက ဘယ်လိုတွေ ဆက်စပ်နေတယ်၊ ယောင်းက ဘာတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်လို့ ရနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆက်စပ်မှုရဲ့ သက်သေခံချက်တစ်ခုဟာ မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ပါတယ်။ ယောင်းမိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဟာ ယောင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင်တော့ အရိုးပွရောဂါပေါ့။ အရိုးပွရောဂါရှိတဲ့ မိဘကနေ မွေးလာတဲ့ သားသမီးတွေထဲမှာ အမျိုးသမီး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အရိုးပွရောဂါရနိုင်ပြီး အမျိုးသားတွေမှာတော့ ၆ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ယောင်းရဲ့ မိဘတွေ အရင်က ပေါင်ရိုးကျိုးခဲ့ဖူးရင် ယောင်းအနေနဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင် ဒီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ဒီလောက် ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားထဲ နဖူးတွေတွန့်၊ အသားအရေတွေ ပျက်စီးနေလို့ အံ့သြနေပါသလား။ ယောင်းအမေရဲ့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်နဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်နေလားဆိုတာ သေချာကြည့်ကြည့်ပါ။ အရေးအကြောင်းတွေ ရှိနေရင်တော့ ယောင်းကိုယ်တိုင်လည်း နေ့စဉ် နေလောင်ဒဏ် ကာကွယ်တဲ့ ခရင်မ်တွေ၊ ဗီတာမင် အီး၊ ဗီတာမင် စီ၊ ရက်တီနောဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့ Serum တွေ သုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ထိခိုက်မှုဒဏ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေအပြင် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် စိတ်ကျရောဂါကို အမျိုးသားတွေထက် နှစ်ဆ ပိုမိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ စိတ်ကျရောဂါဟာ ပိုအဖြစ်များတတ်ပြီး ခံစားရတဲ့အချိန်ဟာလည်း ပိုကြာပါတယ်။ ယောင်းအမေမှာ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နေခဲ့ရင် ယောင်းမှာ စိတ်ကျရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိမရှိ သေချာ သတိထားကြည့်သင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ယောင်းတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို ကျန်းမာလှပစေမယ့် Application (၃) ခု
အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ကြီးရင် မျက်လုံးမှာ ရေတိမ်စွဲတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ယောင်းရဲ့ မိဘတွေမှာ မျက်စိရေတိမ် စွဲနေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ မျက်စိဆရာဝန်ဆီမှာ ပုံမှန်စစ်ဆေးတာကသာ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပါ။
၅။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ရောဂါ
ယောင်းမှာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါရှိနေတာဟာ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ယောင်းရဲ့ အမေဟာလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုဟာ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီရှောင်ရပါမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများနေတာကို ရှောင်ရပါမယ်။ အရက်မသောက်ရဘဲ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ ခံစားနေရသူတွေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရောဂါဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ ယောင်းရဲ့ မိခင်မှာသာ ဒီရောဂါဖြစ်ခဲ့ရင် ယောင်းမှာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၇။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်
ယောင်းရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားဟာ ယောင်းမေမေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးတွေရဲ့ အစားအသောက်၊ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို အနီးကပ် သင်ပေးတဲ့သူဟာ မေမေပါ။ ဒါ့ကြောင့် မေမေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရင် ကလေးကပါ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့သူ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
Related Article >>> အိပ်မက်ကပြောနေတဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး
၈။ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ
အမျိုးသမီးတွေကို သတ်နေတဲ့ အသံတိတ်လူသတ်သမားဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောင်းရဲ့အမေဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဒီရောဂါတွေရခဲ့တယ်ဆိုရင် ယောင်းမှာလည်း ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ များပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ယောင်းမေမေရဲ့ အသက်က ၅၀ ကျော်နေပြီ၊ ပေါင်ကလည်း ၃၀၀ ကျော်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ သူ(မ)ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မျိုးရိုးမလိုက်တော့ပါဘူး။
၉။ ကိုယ်ဝန်နှင့် ကျန်းမာရေး
ယောင်းကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ယောင်းအမေဟာ-
ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေက အများတကာထက် ပိုလွန်ကဲနေခဲ့တယ်
ခဏခဏ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် ယောင်းမှာလည်း ဒီလိုဖြစ်နိုင်ချေတွေများပါတယ်။
၁၀။ မီးဖွားပြီးနောက် စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ခြင်း
ယောင်းမေမေကို မေးကြည့်ပါ။ ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်း စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလားလို့။ ဒီလိုစိတ်ရောဂါတွေဟာ အမေကနေ သမီးကို ဗီဇကူးတတ်ပါတယ်။ ယောင်းမေမေရဲ့ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း အတွေ့အကြုံတွေဟာ ယောင်းအတွက် သဲလွန်စတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယောင်းကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ သွေးစစ်မှုတွေ ပုံမှန်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
၁၁။ ရင်သားကင်ဆာနှင့် သားဥအိမ်ကင်ဆာ
ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီး Angelina Jolie ရဲ့မိခင်ဟာ ရင်သားကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဂျိုလီက ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းလျော့ကျအောင် ကြိုတင်ခွဲစိတ်ထားတာပေါ့။ သားဥအိမ်ကင်ဆာကလည်း မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ ယောင်းရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေမှာ ဒီလိုကင်ဆာရောဂါတွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ယောင်းမေမေရဲ့ရာသီသွေးဆုံးချိန်ဟာ ယောင်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။ သွေးဆုံးချိန်စောမလား၊ နောက်ကျမလားဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သွေးဆုံးကိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ စိတ်ဆတ်ခြင်း၊ ပုံမှန်ထက် တက်ကြွလွန်းခြင်း၊ ညဘက်ချွေးစေးပြန်ခြင်းတွေလည်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။
Translated by Paing (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
Reference : Readers Digest
ခေါငျးစဉျကွီးကွညျ့ပွီး အံ့သွသှားပွီလား? တကယျတော့ ယောငျးမမေရေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ကွညျ့ပွီးတော့ ယောငျးရဲ့ အနာဂတျကနျြးမာရေး အခွအေနကေို သိနိုငျပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးလေးမှာတော့ ကနျြးမာရေး နှဈခုက ဘယျလိုတှေ ဆကျစပျနတေယျ၊ ယောငျးက ဘာတှကေို ဘယျလို ကာကှယျလို့ ရနိုငျမယျဆိုတာတှကေို ဖျောပွပေးပါ့မယျ။
ကနျြးမာရေး အခွအေနေ ဆကျစပျမှုရဲ့ သကျသခေံခကျြတဈခုဟာ မြိုးရိုးဗီဇဖွဈပါတယျ။ ယောငျးမိဘတှရေဲ့ကနျြးမာရေးဟာ ယောငျးရဲ့ကနျြးမာရေးကို ရောငျပွနျဟပျနပေါတယျ။ ဒီအခွအေနကေ အမြိုးသားတှထေကျ အမြိုးသမီးတှမှော ပိုအဖွဈမြားတတျပါတယျ။ ဥပမာဆိုရငျတော့ အရိုးပှရောဂါပေါ့။ အရိုးပှရောဂါရှိတဲ့ မိဘကနေ မှေးလာတဲ့ သားသမီးတှထေဲမှာ အမြိုးသမီး ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက အရိုးပှရောဂါရနိုငျပွီး အမြိုးသားတှမှောတော့ ၆ ရာခိုငျနှုနျးပဲ ရှိပါတယျ။ တကယျလို့ ယောငျးရဲ့ မိဘတှေ အရငျက ပေါငျရိုးကြိုးခဲ့ဖူးရငျ ယောငျးအနနေဲ့ ကယျလျဆီယမျနဲ့ ဗီတာမငျ ဒီ ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာတှကေို စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
ဒီလောကျ ဂရုစိုကျနတေဲ့ကွားထဲ နဖူးတှတှေနျ့၊ အသားအရတှေေ ပကျြစီးနလေို့ အံ့သွနပေါသလား။ ယောငျးအမရေဲ့ မကျြလုံးတဈဝိုကျနဲ့ နှုတျခမျးတဈဝိုကျမှာ အရေးအကွောငျးတှေ ဖွဈနလေားဆိုတာ သခြောကွညျ့ကွညျ့ပါ။ အရေးအကွောငျးတှေ ရှိနရေငျတော့ ယောငျးကိုယျတိုငျလညျး နစေ့ဉျ နလေောငျဒဏျ ကာကှယျတဲ့ ခရငျမျတှေ၊ ဗီတာမငျ အီး၊ ဗီတာမငျ စီ၊ ရကျတီနောဓာတျတှပေါဝငျတဲ့ Serum တှေ သုံးပေးဖို့လိုပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှဟော စိတျထိခိုကျမှုဒဏျ၊ စိတျဖိစီးမှုဒဏျတှအေပွငျ ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှကွေောငျ့ စိတျကရြောဂါကို အမြိုးသားတှထေကျ နှဈဆ ပိုမိုခံစားရနိုငျပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှမှော စိတျကရြောဂါဟာ ပိုအဖွဈမြားတတျပွီး ခံစားရတဲ့အခြိနျဟာလညျး ပိုကွာပါတယျ။ ယောငျးအမမှော စိတျကရြောဂါဖွဈနခေဲ့ရငျ ယောငျးမှာ စိတျကရြောဂါရဲ့ လက်ခဏာတှေ ရှိမရှိ သခြော သတိထားကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ယောငျးတို့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝကို ကနျြးမာလှပစမေယျ့ Application (၃) ခု
အမြိုးသမီးတှဟော အသကျကွီးရငျ မကျြလုံးမှာ ရတေိမျစှဲတတျပါတယျ။ ဒါဟာ အမွငျအာရုံကို ထိခိုကျစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ ယောငျးရဲ့ မိဘတှမှော မကျြစိရတေိမျ စှဲနခေဲ့ဖူးတယျဆိုရငျတော့ မကျြစိဆရာဝနျဆီမှာ ပုံမှနျစဈဆေးတာကသာ ကွိုတငျကာကှယျမှုပါ။
၅။ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျ ရောဂါ
ယောငျးမှာ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျရောဂါရှိနတောဟာ အကွောငျးရငျးအမြိုးမြိုး ရှိနနေိုငျပါတယျ။ ဒီအကွောငျးရငျးတှထေဲမှာ ယောငျးရဲ့ အမဟောလညျး အကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျစတေဲ့ အဓိက အကွောငျးရငျးတှထေဲကတဈခုဟာ မြိုးရိုးလိုကျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကျောဖီရှောငျရပါမယျ။ စိတျဖိစီးမှုမြားနတောကို ရှောငျရပါမယျ။ အရကျမသောကျရဘဲ လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
အယျလျဇိုငျးမားရောဂါ ခံစားနရေသူတှရေဲ့ သုံးပုံနှဈပုံဟာ အမြိုးသမီးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီရောဂါဟာ မြိုးရိုးလိုကျတတျပါတယျ။ ယောငျးရဲ့ မိခငျမှာသာ ဒီရောဂါဖွဈခဲ့ရငျ ယောငျးမှာဖွဈဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားပါတယျ။ တရားထိုငျခွငျး၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးနဲ့ အာဟာရပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာတှေ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
၇။ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားနှငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ
ယောငျးရဲ့ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားဟာ ယောငျးမမေပေျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးတှရေဲ့ အစားအသောကျ၊ နထေိုငျမှုပုံစံတှကေို အနီးကပျသငျပေးတဲ့သူဟာ မမေပေါ။ ဒါ့ကွောငျ့ မမေရေဲ့နထေိုငျမှုပုံစံဟာ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျရငျ ကလေးကပါ ကနျြးမာသနျစှမျးတဲ့သူ ဖွဈလာနိုငျခွေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။
Related Article >>> အိပျမကျကပွောနတေဲ့ ယောငျးယောငျးတို့ရဲ့ ကနျြးမာရေး
၈။ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါ
အမြိုးသမီးတှကေိုသတျနတေဲ့ အသံတိတျလူသတျသမားဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆီးခြိုရောဂါ ဖွဈပါတယျ။ ယောငျးရဲ့အမဟော ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဒီရောဂါတှရေခဲ့တယျဆိုရငျ ယောငျးမှာလညျး ဖွဈဖို့ အခှငျ့အလမျးတှေ မြားပါတယျ။ ရောဂါဖွဈတဲ့အခြိနျမှာ ယောငျးမမေရေဲ့ အသကျက ၅၀ ကြျောနပွေီ၊ ပေါငျကလညျး ၃၀၀ ကြျော၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး မလုပျဘူးဆိုရငျတော့ သူ(မ)ရဲ့နထေိုငျမှုပုံစံကွောငျ့ ဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ မြိုးရိုးမလိုကျတော့ပါဘူး။
၉။ ကိုယျဝနျနှငျ့ ကနျြးမာရေး
ယောငျးကို ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ယောငျးအမဟော-
ကိုယျဝနျရှိတဲ့လက်ခဏာတှကေ အမြားတကာထကျ ပိုလှနျကဲနခေဲ့တယျ
ခဏခဏ ကိုယျဝနျပကျြကခြဲ့ဖူးတယျဆိုရငျ ယောငျးမှာလညျး ဒီလိုဖွဈနိုငျခတြှေမြေားပါတယျ။
၁၀။ မီးဖှားပွီးနောကျ စိတျကရြောဂါဖွဈခွငျး
ယောငျးမမေကေို မေးကွညျ့ပါ။ ကလေးမှေးပွီးနောကျပိုငျး စိတျကရြောဂါ ဖွဈခဲ့ဖူးလားလို့။ ဒီလိုစိတျရောဂါတှဟော အမကေနေ သမီးကို ဗီဇကူးတတျပါတယျ။ ယောငျးမမေရေဲ့ မီးဖှားပွီးနောကျပိုငျး အတှအေ့ကွုံတှဟော ယောငျးအတှကျ သဲလှနျစတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ယောငျးကိုယျဝနျရှိခြိနျမှာ သှေးစဈမှုတှေ ပုံမှနျပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။
၁၁။ ရငျသားကငျဆာနှငျ့ သားဥအိမျကငျဆာ
ကမ်ဘာကြျောမငျးသမီး Angelina Jolie ရဲ့မိခငျဟာ ရငျသားကငျဆာကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဂြိုလီက ရငျသားကငျဆာ ဖွဈနှုနျးလြော့ကအြောငျ ကွိုတငျခှဲစိတျထားတာပေါ့။ သားဥအိမျကငျဆာကလညျး မြိုးရိုးလိုကျတတျပါတယျ။ ယောငျးရဲ့မိသားစုဆှမြေိုးတှမှော ဒီလိုကငျဆာရောဂါတှရှေိနခေဲ့မယျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီး လိုအပျတဲ့စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။
ယောငျးမမေရေဲ့ရာသီသှေးဆုံးခြိနျဟာ ယောငျးနဲ့လညျးသကျဆိုငျပါတယျ။ သှေးဆုံးခြိနျစောမလား၊ နောကျကမြလားဆိုတာ ခနျ့မှနျးလို့ရပါတယျ။ သှေးဆုံးကိုငျတဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ စိတျဆတျခွငျး၊ ပုံမှနျထကျ တကျကွှလှနျးခွငျး၊ ညဘကျခြှေးစေးပွနျခွငျးတှလေညျး ခံစားရတတျပါတယျ။
Translated by Paing (ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker)
Reference : Readers’ Digest
Tags: disease, Genatic, Health, KKMM, mom, Relation
လုပ်ရလွယ်ပြီး အရသာရှိတဲ့ ကိုရီးယားစတိုင်လ် တိုဟူးအစပ်ကြော်ချက်
For Her Myanmar December 7, 2018
gym သွားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ယောင်းတွေအတွက် အိပ်ရာမဝင်ခင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ တင်ပါးလေ့ကျင့်ခန်း (၃) မျိုး
ဓမ်မတာလာတော့မယျ့ အခြိနျကို ကွိုတငျအသိပေးမယျ့ Application (၅)ခု
Phyu Thant June 12, 2019
ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားလေ့မှားထရှိကြတဲ့ အမှား (၄) ခု